2 Kronike 22 | IBhayibhile Kwi-Intanethi | INguqulelo Yehlabathi Elitsha
2 Kronike 22:1-12
22 Bandula abemi baseYerusalem bamenza ukumkani uAhaziya+ unyana omncinane kakumkani esikhundleni sakhe, (kuba amatutu eza nama-Arabhu+ ababulala bonke abakhulu,)+ waza uAhaziya unyana kaYehoram walawula njengokumkani wakwaYuda. 2 UAhaziya wayeneminyaka engamashumi amabini anesibini ubudala ukuqalisa kwakhe ukulawula,+ yaye walawula eYerusalem unyaka omnye. Yaye igama likanina lalinguAtaliya+ umzukulwana kaOmri.+ 3 Naye wahamba ngendlela yendlu ka-Ahabhi,+ kuba unina+ wayengumcebisi wakhe ekwenzeni okungendawo. 4 Waqhubeka esenza okubi emehlweni kaYehova, ngendlela efanayo nendlu ka-Ahabhi, kuba baba ngabacebisi+ bakhe emva kokufa kukayise, bemonakalisa. 5 Wahamba ngecebo labo,+ wahamba noYehoram+ unyana ka-Ahabhi ukumkani wakwaSirayeli ukuya emfazweni nxamnye noHazayeli+ ukumkani waseSiriya eRamoti-giliyadi,+ abatoli bamxabela uYehoram.+ 6 Ngenxa yoko wabuyela eYizereli+ ukuze aphiliswe amanxeba awaba nawo ekubethweni kwakhe eRama+ ekulweni kwakhe noHazayeli ukumkani waseSiriya. Ke yena uAzariya+ unyana kaYehoram+ ukumkani wakwaYuda, wehla waya kubona uYehoram+ unyana ka-Ahabhi eYizereli, kuba wayegula.+ 7 Kodwa kwakuvela kuThixo+ ukuba ukuwa+ kuka-Ahaziya kwenzeke ngexesha lokuza kwakhe kuYehoram; yaye ekuzeni kwakhe, waphuma+ noYehoram baya kuYehu+ umzukulwana kaNimshi,+ awathi uYehova wamthambisa+ ukuba anqumle indlu ka-Ahabhi.+ 8 Kwathi kwamsinya nje uYehu akungena kwimbambano nendlu ka-Ahabhi,+ wafumana iinkosana zakwaYuda noonyana babantakwabo Ahaziya,+ abalungiseleli baka-Ahaziya, waza wababulala.+ 9 Bandula bahamba befuna uAhaziya, baza ekugqibeleni bamthimba,+ njengoko wayezifihle eSamariya,+ bamzisa kuYehu. Baza bambulala bamngcwaba,+ kuba bathi: “Wayengumzukulwana kaYehoshafati,+ owayemfuna uYehova ngentliziyo yakhe yonke.”+ Yaye kwakungekho bani wendlu ka-Ahaziya owaba namandla obukumkani. 10 UAtaliya+ unina ka-Ahaziya, wabona ukuba unyana wakhe ufile. Ngoko wasuka watshabalalisa yonke inzala yobukhosi bendlu kaYuda.+ 11 Noko ke, uYehoshabhati+ intombi kakumkani yathabatha uYehowashe+ unyana ka-Ahaziya yamba phakathi koonyana bakakumkani ababeza kubulawa, yaza yambeka yena nempelesi yakhe kwigumbi elingaphakathi lezingqengqelo. Yaye uYehoshabhati intombi kaKumkani uYehoram,+ umfazi kaYehoyada+ umbingeleli, (kuba wayengudade boAhaziya,) wamfihla ngenxa ka-Ataliya, akazange ambulale.+ 12 Yaye waqhubeka nabo endlwini kaTHIXO oyinyaniso efihliwe iminyaka emithandathu,+ ngoxa uAtaliya wayelawula njengokumkanikazi+ kwelo lizwe.+
2 Kronike 22